Ndị ọzọ iji mee anụ anaghị eri anụ | Bezzia
Pau Heidemeyer | 03/05/2021 16:00 | Nri, Ahụike
Ọnọdụ ihu igwe dị mma na-amalite anyị na-achọ izu ụka ọ bụla ka anyị nwee anụ oriri na ọ meụ andụ ma nwee anụ ụtọ. Kama, n'ihi na onye na-eso nri anaghị eri anụ, ọ nwere ike ịdị ka ha agaghị enwe obi ụtọ dịka ndị na-eri anụ.
Nke a abụghị eziokwu kpamkpam, makana ebe a na-eri anụ nwere ike ịnabata ihe ndị anaghị eri anụ chọrọ, ma dịkwa ụtọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ụzọ ọzọ dị mma, Anyị ga-agwa gị mgbe ahụ.
Beingbụ onye anaghị eri anụ nwere ibi ụdị ndụ dị iche, etu ahụ kwa ka ha dị ha nwere ike iri anụ ahịhịa na ụzọ emegharịrị maka nhọrọ nri ha.
Nhọrọ ndị enwere ike ịkwaga n'etiti ya bụ skewers a ma ama, vegan burgers na mushrooms, legge burgers ma ọ bụ akwụkwọ nri eghe na akwukwo nri. Achịcha anụ anaghị eri anụ ga-adị mma mgbe niile ma ọ bụrụhaala na ị bu n'uche ihe ị na-eso yadị ka oge a kara aka nwere ike ịdị ka "ihe ọjọọ" dịka nke ejiri anụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu nhọrọ iji mee a akwukwo nri Anụ MmịAnyị ga-agwa gị n'okpuru ka ị nwee nhọrọ ndị ọzọ n'uche, na ikekwe ị dabeghị n'ime ha.
1 Ihe ndi ozo kacha mma maka ahihia ndi anaghị eri anụ
1.1 Akwukwo nri skewers
1.2 Akwụkwọ ikike Seitan
1.3 Akwụkwọ nri
1.4 Ndị na-azụ Veggie
1.5 Ọka a ghere eghe
1.6 Salam na-ekpo ọkụ
1.7 Yogọt mgbakwasa
2 Elegharala ihe oriri na-eme achịcha anya
Ihe ndi ozo kacha mma maka ahihia ndi anaghị eri anụ
Enwere ụzọ dị iche iche iji hazie anụ anaghị eri anụ. Na mgbakwunye, ị ga - ahụ nhọrọ zuru oke nke ga - enyere gị aka ịnụ ụtọ gastronomy yana akụkụ ndị ọzọ.
Akwukwo nri skewers
Enwere ike ịme skewers naanị nke akwụkwọ nri, a na-akụnye ha isi na isi na ụtọ nke embers. Na mgbakwunye, ọ na-ewetara ọtụtụ agba na imi ihe mgbe niile. A na-ejikarị akwụkwọ nri ndị a eme nri: eyịm, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha uhie uhie, tomato, aubergines ma ọ bụ zukini.
Mushrooms nwekwara ike zuru oke maka ichi. Must ga-egbutu ha iberibe iji tinye ha n'ime osisi ma ọ bụ nke elongated elongated ka ị wee nwee ike ikpokọta skewers na-amasị gị. Mgbe ha na-esi ya, i nwere ike tinye ihe na-esi ísì ụtọ na mmanụ iji mee ka ọ tọọ ụtọ.
Y’oburu n’itinye otutu protein na skewers ndia ka ipuru ime tinye cubes nke tofu siri ike. Ngwaahịa a, nke sitere na soybean, emeela ka protein mụbaa ọtụtụ ndị kpebiri ịbụ onye anaghị eri anụ ma ọ bụ anụ nri.
Akwụkwọ ikike Seitan
Dị ka tofu, ị nwere ike ime seitan fillets, nri nke ọka wheat na-enweta site na ịgwakọta ntụ ọka na ịsacha ahụ iji wepụta stachi. Na mgbakwunye, ọ na-enye protein ugboro atọ karịa anụ, opekata mpe nke 75%.
Iji mepụta filitan seitan ị nwere ike ịgbaso obere uzommeputa.
1 akụkụ chickpea ntụ ọka.
2-3 akụkụ nke ntụ ọka wit.
1 akụkụ achicha ma ọ bụ ntụ ọka.
Gwakọta na mmiri, akwukwo nri efere, na soy ihendori.
Enwere ike itinye akwụkwọ nri ndị a na-esi ísì ụtọ, ị na-akpụzi ha ma were ya gaa grill. Yabụ na seitan gị ga-adị kemmiri ihe, na-agbanwe agbanwe yana nke na-atọ ezigbo ụtọ.
Enwere ike ịgba gị ume ịkwadebe akwụkwọ nri akwụkwọ nri maka anụ anaghị eri anụ. Nwere ike iji zukini ma ọ bụ tomato, dịka ọmụmaatụ. Can nwere ike jupụta ha na akwụkwọ nri ma ọ bụ ude chard, na ị nwere ike itinye tofu ka ọ mụbaa protein oriri ya.
Eggplants na ero Ha nwekwara ike jupụta ma zuru oke na barbecue. Ọ bụrụ na ị bụ lacto-anaghị eri anụ ị nwere ike iji chiiz mee ya juicier.
Ndị na-azụ Veggie
Burgers na-abụkarị ndị eze nke barbecues na na nke a, ha nwere ike ịbụ kwa. A na-esi na ọka na mkpuru osisi sie burgers ndị anaghị eri anụ. A na-ejikọ ha na akwukwo nri, ma ọ bụ spain ma ọ bụ karọt dịka ọmụmaatụ. Nke a na-enye ha ọmarịcha ederede na ekpomeekpo.
Chickpeas ma ọ bụ lentil nwere ike iji dị ka mkpo, na mgbakwunye, enwere ike ịkwadebe ha dị ka a ga - asị na ha bụ falafel achicha. Enwere ike isonye na mkpo chives, galik, pasili, ose na nnu.
Ọ bụrụ na ị bụghị onye nwere mmasị na mkpo, ị nwekwara ike ịme hamburgers dabere na osikapa, peas ma ọ bụ jiri oat. Jiri ọka niile ị masịrị, mee nyocha gị ma nwee anụrị na kichin.
Ọka a ghere eghe
Agbanyeghị na ekwenyeghị ya, ọka esiri esi na bekee zuru oke iji ghee ihe eji esi nri. Ọka nwere ezigbo nri na-edozi ahụ nke na-edozi ahụ, na otu n'ime ụzọ kachasị mma iji were ya dị na barbecue.
Ọka na-eso nri achicha anaghị eri anụ mgbe niile. Can nwere ike ihicha mmanụ niile na mmanụ tupu ị kechie ya na mpempe akwụkwọ aluminom. Debe ya na imi ihe, gbanwee ya ruo minit 15 ka o wee mee ya nke ọma.
Salam na-ekpo ọkụ
Nwere ike ime salad akụkụ nke dị n’etiti nlebara anya niile, yana tomato, letus, endives, kukumba, na akwụkwọ nri niile ị chọrọ.
Mkpụrụ osisi romaine dị mma iji mee ezigbo salad, obi dị jụụ ma dịkwa ọhụrụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị soro salad ahụ jiri akwa dị mma, ị ga-enwe salad zuru oke. Tinye ezigbo mmanụ, mmanụ bọlsọm, nnu, ose na ụfọdụ ihe nri.
EỌ dị mkpa ka ị tụọ oge nri nke salad a na-ekpo ọkụ, ebe ọ bụ na ha enweghị ike ịdị ogologo na mmiri, dịka ọmụmaatụ, kukumba nwere ike ịbụ otu nkeji, mana nkeji abụọ, ọ bụrụ na ị ga-ewepụta oge, okpomọkụ ga-eme ka akwụkwọ nri dị nro nke ukwuu.
N'ikpeazụ, ị nwere ike ịkụ nzọ na yogọt ihe ọ homụ youụ nke a na-eme n'ụlọ nke na-enye gị ohere ịnye akwụkwọ nri gị aka pụrụ iche ma ha adịchaghị mma. Yogurt na-enye ọtụtụ nhọrọ, enwere ike ịgwakọta ya na galik na kukumba iji mee tzaiziki a ma ama, ị nwekwara ike iso yogọt na soy ihendori nye ya mmetụ dị iche.
I nwekwara ike gwakọta yogọt, ya na tomato, yabasị na coriander, yabụ ị ga-enweta iberibe tomato esi India mara mma. Ha bụ nhọrọ zuru oke ka ị nwee ike isoro akwụkwọ nri na hamburgers ị kwadebere na mbụ.
Elegharala ihe oriri na-eme achịcha anya
Dịka ị hụworo, enwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ ị nwere ike isi esi nri anụ anaghị eri anụ, n'ihi na anyị niile na-eche maka anụ ma ọ bụ karịa anụ. Ma akwụkwọ nri, hamburgers, skewers ma ọ bụ salads nwere ike ịdị mma dịka otu anụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Ndị ọzọ iji mee anụ anaghị eri anụ